Ahiana ny fipoahana ara-tsosialy any Toamasina… : jerem-potsiny ny vidim-bary, efa 2.500 Ar ny kilao | NewsMada
Ahiana ny fipoahana ara-tsosialy any Toamasina… : jerem-potsiny ny vidim-bary, efa 2.500 Ar ny kilao
2.500 Ar, efa misy tafakatra 3.000 Ar aza. Izany izao no vidin’ny kilaom-bary (vary nohafarana), any Toamasina. Tsy voahaja ny baikon’ny praiminisitra momba izany. Manginy fotsiny ny tsy fandriampahalemana, ny delestazy, ny loton’ny tanàna. Ahiana ny fipoahana ara-tsosialy. Fanadihadiana…
Nazava ny baikon’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier, nadritra ny fandalovany teto Toamasina, ny 11 marsa lasa teo, fa haato avokoa ny fombafomba rehetra mety mahatonga ny fahatarana ny famoaham-bary avy ao amin’ny seranan-tsambo. Haato, tahaka izany, koa ny “certificat de consomabilité” ary tsy tokony hisy ny hanafim-bary sy hampiakatra ny vidiny fa tazomina amin’ny teo aloha ihany. Navoitrany izany nandritra ny fivoriany niaraka tamin’ny mpandraharaha rehetra misy ifandraisany momba ny vary, tetsy amin’ny efitranon’ny faritra Atsinanana.
Tsy izay ihany, nanamafy ary namepetra ny prainministra ny mba hametahan’ny mpivarotra ny sora-bidin’ny vary eo amin’ny entana amidy. Roa herinandro aty aoriana, tsy voahaja izany baikon’ny fitondrana ambony izany eto Toamasina.
Ambadika, naniraka ireo mpiara-miasa aminy ny eo anivon’ny prefektora, niaraka tamin’ny sampandraharahan’ny varotra sy fanjifana, polisy ary mpanao gazety vitsivitsy nanao fidinana tampoka teny anivon’ny magazay fitahirizan’ ireo mpanafatra vary.
Vokany, tsy tambo isaina ny vary mitoby ao anatin’ny magazay notsidihina, hita tao anatin’ny taratasy nanafarana ny vary fa mitentina 70.000 Ar ka hatramin’ny 72.000 Ar ny iray kitapo amin’ny vary nividianany azy avy any ivelany.
Ho an’ny iray etsy Mangarano, hita fa mivarotra 75.800 Ar amin’ ireo mpamongady ity farany izay hivarotra indray amin’ny mpaninjara ary samy mbola hisy saran-dalana izany rehetra izany. Vokany, tonga hatramin’ny 100.000 Ar ny vidin’ny iray kitapo amin’ny mpanjifa vary noafarana.
Ho an’ i Toamasina, hatreto, efa manodidina ny 2.500 Ar ny iray kilao raha 1.200 Ar kosa ny kapoaka any Marolambo sy Maroantsetra.” Tsy tokony hisy fiakarany ny vidin’ny vary fa efa nisy ny marimaritra iraisana tamin’ny mpandraharaha” , hoy ny praiminisitra ny 11 marsa teo raha nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny lapan’ny faritra Atsinanana.
Photo 1 : Tsy voahaja ny baikon’ny fitondrana amin’ny tsy tokony hampakarana ny vidin’ny vary nohafarana
Tsizarizary ny fitsinjarana ny herinaratra
Niaiky ny talem-paritry ny Jirama, Raveloson Leonard, fa tsy maintsy hiainan’ny mpanjifa eto Toamasina ny fahatapatapahan’ny herinaratra, raha nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety izy, ny alakamisy 17 marsa lasa teo tao amin’ny birao fiasany.
Mila fanarenana ny ao Volobe, ary misy tariby mitondra herinaratra very izay mirefy 2.100 m ka mitaky fotoana lava izany rehetra izany. “Tsy maintsy miaina anatina delestazy aloha isika” , hoy izy.
Ankilany, mitonona ho tsy misy vola entina hanarenana ny fotondrafitrasa ny Jirama ka miantso vonjy amin’ny malala-tanana. Mifanohitra amin’ izany kosa ny ambaran’ny mpanjifa fa mandoa vola saran’ny herinaratra sy rano laniny avy ny mpanjifa ny Jirama.
Mankaiza izany volabe efain’ny mpanjifa izany? Milahatra mihitsy ireo manatitra izany noho ny tahotra ho tapaka rano sy herinaratra. Nohamafisin’ny mponina mihitsy aza fa tsy tokony ho nanao valandresaka ho fitohizan’ny delestazy ny talen’ny Jirama fa vao maika aza mampirongatra ny asan-jiolahy, satria hiaina anatin’ny haizina ny isan-tokantrano
Vokany, mirongatra izaitsizy ny vaky trano. Amin’ izay resaka fotodrafitrasan’ny Jirama izay ihany, miahiahy amin’ny mety hitondrana faisana amin’ny hisian’ny fifampikasohan’ny herinaratra ny haino aman-jery iray noho ny faharatsian’ny fametahan’ny jirama ireo tariby mitondra herinaratra toa zara fa vita etsy Andranomadio.”Raha izao no mipoaka, ho may ny radionay”, hoy ny tompon’ andraikitra.
Miraviravy tanana ny kaominina sy ny faritra
Mafy ho an’ny mponina sy vahoaka avokoa ireo rehetra ireo. Fiakaran’ny vidim-bary, herinaratra tsizarizary, asan-jiolahy noho ny vaky trano, fivangongon’ny fako sy rano miandrona etsy sy eroa ity; farany izay efa hita taratra fa mitondra karazan’ aretina maro isan-karazany amin’ izao fatoana izao.
Ankoatra ny teo anivon’ny prefektiora amin’ny fanarahana akaiky ny tsy tokony hisian’ny fanafenam-bary, tsy andrenesam-peo kosa ny eo anivon’ny kaominina sy ny faritra manoloana ny fahalotoan’ny tanàna. Ny faritra rahateo izay misahana voalohany ny fampandrosoana isam-paritra manoloana ny vahoaka noana. Tsy mahavaha olana ihany koa ny eo anivon’ny sampandraharahan’ny Varotra sy ny fanjifana. Ho an’ ity farany, ny tale jeneralin’ny minisiteran’ny Varotra sy fanjifana, Rakotomanga Solo Aritina, mihitsy no tonga teto an-toerana fa toa lany andro amin’ny fivoriana tetsy amin’ny lapan’ny faritra, ny marain’ny zoma teo. Tsy nisy vahaolana omena ny vahoaka efa anatin’ny tsy fihinanana vary, manao sakafo tapa-tsinay.
Vokatr’ ireo rehetra ireo, mahatonga ahiahy ny mety hisian’ny fipoahana ara-tsosialy ny angom-baovao etsy sy eroa.